The Ultimate Guide to Clomid kuti uchengetedze kushaya vana muvakadzi
Zvose pamusoro peComomid
1. Chinonzi Clomid chii? Chinoshanda sei? 2. Clomid Uses
3. Clomid dosage 4. Clomid inoguma
7. Clomid inobatsira 8. Clomid anoongorora
9. Clomid inotengeswa 10. Clomid yekurapa kusabereka muvakadzi- (Chidimbu)
Chinonzi Clomid chii? Chinoshanda sei?
Clomiphene citrate zvakare akadana Clomid (50-41-9), iri mishonga inonzwika inoshandiswa mukurapa maitiro evanhukadzi vasina vana. Munyika yose inotengeswa pasi pemazita emhando dzakasiyana siyana seClomidac, clomene, Bemot, Clomi, clomifen, Beclom, Blesifen, Biogen, Blesifen, Chloramiphene, ClomHEXAL, et al. Kushandiswa kwaro kwakagamuchirwa uye kunorumbidzwa kushandiswa kweutano mu1967 muU.SA. Hwose hutano hunodikanwa huno mushonga wakachengeteka uye unoshanda kwazvo maererano neE Essential Medicines 'list pane World Health Organization. Inowanikwa semishonga yemishonga. Clomid iri pakati pezvipembenene zvakasiyana-siyana zvinokonzerwa nehutachiwana hwevakadzi muhutachiwana hunokonzerwa neoligo-ovulation uye anovulation.
Mushonga unoshanda nenzira iyo ine muviri unofunga kuti mazinga eesrogen ari pasi uye saka zvichiita kuti chirwere chepituitary chiwedzere kuwedzera luteinizing hormone LH kana follicle inokurudzira hormone zvimwe zvinonzi FSH secretion. Yakakura FSH maitiro anoita kuti mavhai emuviri ave neavo kana kupfuura mazai follicles akabudiswa ayo achagadziridzwa kana kubudiswa muovulation. Kune rumwe rutivi, marefu eHH anokonzera ovulation.
Clomid (50-41-9) yave iri nzira inofanirwa zvakanaka pakati pevanofanirwa nemakore ekare kwemakore makumi mashanu emakore ekurapa vanachiremba kana kuti OB-GYNs vanowanzopa clomiphene citrate vasati vatarisa rimwe kana maviri kuti vaone nyanzvi yehutano kune mamwe mazano chaiwo. Dzimwe nyanzvi dzokubereka dzinoisa clomiphene citrate zvakare. Iyi mishonga haina kurongerwa kune vakadzi vane mazai asina kuumba mazai zvakanaka (primary pituitary kana kuti gland kusagadzikana kusakonzera).
Zvinyorwa zvehutano zvehutano, hutachiona hunobuda, hutachiona hunobuda, hutachiona hunobuda, hutachiona hwekuvhara pamuviri, galactorrhoea, syndrome ye polycystic ovaries, Chiari-Frommel malady, steroid hormone insufficiency, oligospermatism, kuongororwa kwekuvhiringidzika kwegonadotrophic kushanda kweglanded endine. Clomiphene citrate inowanzobatsira kune avo vanoedza kukurudzira sangano reUnited Nations rekudzivirirwa rine chero chezvinetso zvinotevera:
Izvo zvisina kufanira Ovulation: zvinotambudza kubata pamuviri kamwechete kana mukadzi ari mumiganhu yenharaunda saka saka haana kukwanisa kuti asakwanisa kuva nechokwadi kana iye ari kuvhara. Kana ikashanda, kushandiswa kwema clomiphene citrate kunofanirwa kuumba mhinduro chaiyo yeyvulatory kune mvumo yekuita zvepabonde nguva dzose kana intrauterine insemination.
"Male Factor" zvinetso zvekubereka: kana paine tangle nehutano hwehuviri hwehutano, kazhinji mutapi wako anokwanisa kuratidzira intrauterine insemination kuti awedzere tariro yehupenyu hwemamiriro ezvinhu. Clomiphene citrate inowanzojaira kurongedza urongwa hwemashure hwekutsvaga kwekuita kwemukadzi.
Kusanzwisiswa Kusingazivi: clomiphene citrate yakabatanidzwa pamwe chete mukuwedzera kwehutano hwehutano hwehutano muhutano hwehutano hwakanaka hwakave nehutano hwemhando dzose dzekuberekwa, asi huripo nzvimbo inobatanidza kubata pamuviri.
Hazvikurudzirwi kuita chiratidzo che ultrasound kuti chisabvise chero chipi zvacho chakakosha chekuita zvepabonde gland kuwedzera pamberi pehutano hutsva hwehutano.
Clomifene yave yakashandiswa pamwe chete nemichina yakasiyana-siyana yakabatsiridzirwa inyanzvi yekuita kuti kuwedzere kubudirira kwehutano hwemhando dzakasiyana
Clomifene inowanzoshandiswa mukurapa eunuchoidism seimwe ye androgenic hormone kushandiswa kweutano.
Dosage fomu: mapiritsi NDC 0068-0226-30: mapiritsi e50 mg mumabhokisi emakumi matatu
Matafura ari mu unit unit, white, scored, and debussed clomiphene citrate makumi mashanu.
Chengeta mahwendefa pakushambidzwa kunodzorwa 59-86 ° F (15-30 ° C). Chidziro kubva pakupisa, chiedza, uye kunyanyisa kunya, uye kuchengetedza muzvivharo zvakavharwa.
Kubudirira uye kurapwa kwevatsvaki ve clomiphene citrate kurapwa kunofanirwa kutarisirwa navanachiremba vekare mukurapa kwehutano hwezvehutano kana kuti matambudziko endocrine. Varwere vanofanira kusarudzwa kuti vawane kurapwa ne clomiphene citrate chete pavanonyatsoongorora kuongorora. Urongwa hwekurapa hunofanirwa kudhindwa zvisati zvaitika. Zvipingamupinyi zvekuzadzisa chinangwa chekurapa kunofanirwa kusarudzwa kana kukodzera kurapwa musati watanga clomiphene citrate. Icho chinangwa chokurapa chinofanira kuva chakanyanyisa uye chinogona kuisa njodzi uye chinotaurwa nemurwere et al. kunetseka mukati mekuita kwechimiro chemuviri.
Kurapa kwevarwere vakasarudzwa kunotanga, kutanga ne, mukoti wekofi, makumi mashanu mg zuva nezuva (tablet 1) kwemazuva mashanu. Nhamba iyo inofanira kuwedzerwa chete kune ivavo varwere veUnited Nations sangano haisi kumira mukupindura cyclic makumi mashanu yemagamine clomiphene citrate. Nhamba yekofi isingagumi kana urefu hwekambani yekurapa inonyatsorayirwa kana kunyanya kunzwisisika kune hormone inonzi pituitary inofungidzirwa, kufanana nevarwere vane polycystic ovary syndrome.
Murwere anofanirwa kuongororwa zvakanakisisa kuti asabvisa chimiro chemuviri, gland gland nekuwedzera, kana kstst pakati pemishonga yese yekurapa.
Kana kukanganiswa kweprogestin-iyo inokonzerwa yakarongwa, kana kana chirume chepachiviri chepachiviri chepachiviri chemukati chikaitika mukati mekurapa, purogiramu yemakumi mashanu emisi zuva kwemazuva mashanu inofanira kutanga kana pamusoro pezuva rechishanu rekufamba. Kuchengetwa kwezvechiremba kunogona kutanga zvakare chero nguva mukati memurwere weUnited Nations sangano raive risati rava nevakadzi vemazuva ano vemuviri yekuberekwa ropa. Kana imwechete iyo inogadzirwa nehutachiwana ichi, hazvibatsiri kuwedzera chiremba mukubudirira kwemaitiro ekurapa.
Kana chirongwa chemugadziri chisingaoneki sechichiitika kamwe chekutanga chekurapa, chikamu chechipiri chezana rimwe nerimwe (mairi mapiritsi makumi mashanu emagetsi anopiwa sechirwere chezuva nezuva) kwemazuva mashanu anofanira kufanana. Iyi dzidzo inogona kutanga zvakare semashure makumi matatu kwemazuva kamwe kamwe yekare yakachengetedza nzvimbo inotorwa kuti isabvisa kuvapo kwekuberekwa. Kuwedzerwa chirwere kana nguva yekurapa kumativi akare zana mg / zuva kwemazuva mashanu hazvikurudzirwi.
Ruzhinji rwevarwere United United agency sangano rekugadzirisa urongwa huri kuronga kubudisa rinogona kuita saizvozvo kamwechete iyo ndiyo nzira yekutanga yekurapa. Kana zvakasikwa zvisingaitiki kamwechete maitatu emishonga ekurapa, kumwe kurapwa ne clomiphene citrate hazvikurudzirwi uyewo murwere anofanira kuongororwa zvakare. Kana zvitatu zvinopindura zvikaitika, zvisinei kuti kuberekwa hakuna kuwanikwa, kumwe kurapwa hakubvumirwi.
Sezvo clomiphene citrate inotungamirira mukubudiswa kwemazai akawanda, mikana yako yekuwana kuwanda (mapatya kana katatu ... dzimwe nguva zvimwe) inokwira. Kushanda pamwe neshamwari ine nyanzvi yekuziva kubereka nyanzvi Sangano reUnited Nations rinorondedzera kuti chirongwa chakanaka chinopedza mukana wepamusoro-yakawanda mawanda.
IVF imwe nzira yekugadzirisa nhamba yevana kuburikidza nekuberekwa kwevana vakanaka / zvibereko zvevana.
Apo zvinosanganisira kukurudzira kushandiswa kwehupenyu, clomiphene citrate inoshamisa kukunda, zvichiita kuti kubudiswa kweii mazai akakura mumakore anenge makumi masere evasikana veUnited Nations anoshandisa iyo.
Boldenone Undecylenate (Kushanda) Zvishandiso, Purogiramu, Kuyera, Kucheka, Kudhinda(Inotanga mune itsva browser tab)
Kana iwe munguva pfupi yapfuura wakamisa clomiphene citrate, pane mukana waunokwanisa kungoita unyanzvi huri kuwedzera maitiro ezuva (kana kuti mavhiki mashoma) kana iwe wekupedzisira iwe. Izvi zvinowedzera zvinokonzera zvinogona kuita kuti iwe unetseke kuti clomiphene citrate uye metabolite yako inofanira kunge iri muhutano hwako uye inoshamisa zvisati zvambopera. Kuti uone zvisinei kuti nguva yakareba clomiphene citrate ingangodaro yakaramba iri muhupenyu hwako, zvakakosha kufungisisa nezvekubviswa kwayo hafu-hupenyu hwemazuva mashanu kusvika kune manomwe.
Izvi zvishanu kusvika kwechinomwe-kupera kwezuva Clomid hafu yeupenyu zvinoreva kuti zvichatora nguva inenge kusvika kwevhiki yakazara kamwe purogiramu yako yokupedzisira kubvisa mazana mashanu ezana remakwenzi echlmiphene citrate kubva pakupararira. Uchiziva kuti clomiphene citrate yakadaro kuparara kwehafu yehupenyu, iwe uchave wakarurama mukufungidzira kwako kuti ichiri muchirongwa chako - pasinei nokuti kwave mavhiki kubva pakuraira kwako kwekupedzisira. Pakati pevhesi, inotora pakati pe makumi maviri nemanomwe.5 uye 38.5 mazuva ekubvisa clomiphene citrate kubva mumamiriro ako zvachose; anenge mavhiki mana kusvika matanhatu
Mamwe mamwe mapepa rugwaro rwekuti hafu yeupenyu yaClomid inenge mavhiki maviri (14 mazuva), izvo zvinoreva kuti clomiphene citrate inogona kuramba iri mumutambo wako kusvika kumavhiki gumi nerimwe kana imwe yako yekupedzisira. Vazhinji vashandisi vanofanira kutarisira clomiphene citrate kuti varambe vachipararira pakati pemwedzi mitatu nematatu kana vachisarudzwa. Izvo zvinofanira kuonekwa kuti clomiphene citrate inoumbwa nevazhinji isomeri: clomiphene (~ 62%) uye zuclomiphene (~ 38%).
Kupera hafu-hupenyu hwema clomiphene chemakemikari yakakura inogadzirika pamasikati makumi maviri nemana, asi iyo yekuclomiphene yemakemikari yakawanda yakareba kwenguva refu. Iko inonzi clomiphene inobviswa mukati memavhiki masere, asi zuclomiphene chikamu chinokonzera nguva yakareba yekuparadzwa kweCommid. Zuclomiphene inoratidzika mukati memvura yakanaka yeplasma imwe chete pamwedzi we clomiphene citrate ichipedzisa uye inoona zviyero zvinorondedzerwa mumusana usina kuchena imwe chete yehafu yevhiki
Kunyange zvazvo clomiphene inoramba ichitenderera kwechirevo chemavhiki mana kusvika kwegumi nerimwe chete kana mwero wokupedzisira wemushandi, havasi vashandisi vose vanogona kubvisa mishonga nenzira yakadaro. Vamwe vashandisi vanogona kubvisa enclomiphene uye zuclomiphene isomers nokukurumidza kudarika (mukati mavhiki masere), asi vamwe vanofanira kuramba vachiine zuclomiphene mumapapupa anenge ari masvondo matanhatu. Kusiyana-siyana pamunhu pakuparadzaniswa kwemajenya emagetsi kunogona kutsanangurwa nezvipembenene zvakadai semunhu mumwechete, kuwedzerwa, uye nguva yekugadzirisa.
Vakadzi vaviri vanogona, panguva imwechete, vashandise 50 mg clomiphene kwemazuva mashanu akatevedzana mushure mekunyengera kwekate. Kunyange zvakadaro, mumwe mushandisi anogona kubvisa mushonga nekukurumidza kupfuura imwe. Zvose zvinoenderana nehutano hwemunhu. Kune vamwe vashandisi, mishonga inogona kuramba yakashanda kwenguva yakareba apo vamwe, mishonga ichave yakarara munguva pfupi.
Genetics: Zvinyorwa zvezvokurapa zvinoratidza kuti clomiphene inowanikwa mukati memukati mutezo metabolism. Kunyange zvazvo yakananga nhengo dzomukati dzinopindurwa pamagetsi ayo asinganzwisisiki, imwe nzira inotendwa kuti iite basa rakaoma ndeyeYYP2D6 (cytochrome P450 2D6).
Kuwanda kwezvinodhaka kana havasi vose vane zvipo zvavo uye zvisizvo zvavo zvichienderana nekushandisa kwaunoita. Semuenzaniso, kana kushandiswa zvisina kunaka, kana kana kupfuura, Clomid inogona kuisa vashandisi pangozi yekuvandudza huwandu hwemigumisiro. Zvisinei, pane zvimwe Clomid madhara izvo zvizere uye zvinogona kupera mukati kwenguva pfupi. Kune rumwe rutivi, unogona kuve nemigumisiro yakashata yakawanda zvikuru naizvozvo paunotora dhesi yakakwirira kupfuura yakataurwa nachiremba wako. Migumisiro yechirwere yakawanda pakati pevashandi veClomid inosanganisira;
Kusuruvara kwepabonde, kurwadziwa, uye kusagadzikana
Vaginal uye uterine kubuda ropa
Zvisinei, kune zviremera zvakakomba, asi zvinongoitika chete zvichienderana nekutora kwaunoita sei mushonga. Mukutaura, muviri wemuviri wehutoriwo unokoshawo wezvaunoona mushure mokutora Clomid. Vamwe vanhu vachabatwa nemigumisiro yakakomba kunyange kana vakatora zvinorehwa kana zviduku. Ndicho chikonzero nei tichigara tichikurudzira vatengi vedu kuti vatange kuongororwa kurapwa vasati vatanga kutora ichi chirwere. Kana iwe ukawana chimwe chezviitiko izvi, unofanirwa kutsvaga kurapwa kwenguva pfupi;
Iwe unofanirwawo kuona kuti kana zvinhu zvisingakanganisi, Clomid inogona kutungamirira kumimba yakawanda yekuzvitakura. Pane mukana wakareba wekuti iwe unogona kutora pamuviri kana uchishandisa chigadzirwa ichi, uye nezve 7% kuti uchawana mapatya uye 0.5% mukana wekuti iwe uwane katatu kana kupfuura mairairo. Icho chakanaka kuti iwe utaure nachiremba wako kutanga, kurukura nezvengozi, uye uone kana iwe wakakodzera kutakura mapatya kana kuwanda. Kana iwe usati wakagadzirira kutora pamuviri, kuchenjera kuti uongorore pedyo.
Usati washandisa Clomid, iva nechokwadi chokuti hausi weharagiki kana kuti hypersensitive kune chero yezvigadzirwa zvayo. Iwe unogona kutaura nechiremba wako kutanga uye rega mazano mazano iwe iwe kana iwe akakodzera kuishandisa. Nenzira iyi, unogona kudzivisa kuzviisa pangozi yekuwana chero ipi zvayo yemigumisiro iyi. Uyewo, iva nechokwadi chokuti iwe unotevera dhigiriji inorayirwa.
Kune vakadzi vanoshandisa chigadzirwa ichi nenzira yakarurama uye havasi hypersensitive kwazviri, kune zvakawanda zvingave zvikwereti zvingatarisira. Iva nechokwadi chekuti unosanganisira chiremba wako kare, munguva, uye shure kwekupedzisa dhigirii yako yeComidid kuti iwe ufare zvikuru Clomid inobatsira. Clomid inopa zvakasiyana-siyana zvinobatsira kune vashandisi izvo zvinotevera;
Iyo inodhura yakawanda - iyi ndeimwe yenzira dzisingakwanisiki dzokurapa kusabereka. Mutengo weCommid uchienzaniswa nezvimwe zviyero zvakadai seVIV hazvienzaniswi. Yakapinda semuponesi wehupenyu kune vamwe vave vachigadzirisa nyaya dzisingabatsiri asi vasingachapi kurapwa nekuda kwekushaiwa kwemari. Migumisiro inoshandiswa nevashandi kubva kune iyo kudarika kukosha kwemari yakashandiswa.
Iyo mishonga yemuromo - mishonga yemuromo inonyanya kuoma uye inosvika pakurwadziwa kwakanyanya. Izvi zvakasiyana nemajojo apo vanoshandiswa vanofanira kuisa masingano kumativi ose emuviri wavo, izvo zvinogona kunge zvisingasviki. Clomid imwe yezvipatara zvishoma zvisingabatsiri izvo zvinochengetedza vakadzi kubva pamatambudziko akadaro.
Munhu anonyanya kutarisira anogona kuzvipa-iyo nhau yakanaka ndeyokuti haufaniri kushanyira nyanzvi yekubereka kuwana gwaro reCommid. Izvi zvinoita kuti zvive nyore, kunyanya kana iwe usingazivi chero unyanzvi hwekuberekera pedyo newe. Iyo inguva yekuchengetedza, uye chikamu chakanakisisa ndechekuti yakachengeteka kushandiswa kana iwe ukatevera mutemo wakakurudzirwa wekushandiswa.
Inouya nemamwe madhara - kana yakashandiswa zvakanaka, Clomid ine zvishoma zvisingazovi nemigumisiro. Kana ukawana chero, ivo vanyoro chete vanozoenda kwenguva pfupi mushure mekurega kushandiswa kana mushure mokunge muviri wako uchishandiswa pamigumisiro. Uyewo, yeuka kutenga mishonga kubva kune anonyadzisa mugadziri kana mutengesi kuti ave nechokwadi chokuti unowana chigadzirwa chakanaka kune zviri nani zveComidid.
Ichi chigadzirwa chave chakagamuchira mhinduro dzakanaka uye zviyero kubva kune avo vakashandisa izvi zvisati zvaitika. Vakawanda veavo vakashandisa vakati vakaona nekukurumidza Clomid inoguma, uye vakashamisika nemafungiro akaita sei kumitumbi yavo. Vazhinji vevakadzi vakataura kuti vakanga varasikirwa nenguva yavo apo vamwe vaiwana zvisiri izvo uye havana kukwanisa kutora pamuviri, asi izvo zvaiva kusvikira vadzidza nezveiyo inonakidza mishonga. Uyewo, vazhinji vavo vakawana mhinduro mukati memwedzi mitatu mushure mekushandisa.
Vashoma vavo vakanyunyuta pamusoro pemusoro, kusuruvara, kurarisa, uye kurutsa asi vazhinji vevaya vakabvuma zvechokwadi kuti vakanyora pamusoro pemishonga uye migumisiro yakamira mushure mekugadzirisa kushandiswa. Kune rumwe rutivi, ruzhinji rwevashandi vanonyunyutika kuva nechakaipa chakaitika naClomid vakabvuma kuti vakashandisa mishonga vasina kutarisa kuongororwa kwechiremba. Zvinowanzoitika kumushonga wemishonga kuti uwane maitiro akavhenganiswa uye kuongororwa kubva kuvashandi vakasiyana-siyana. Kazhinji, Clomid ndiyo inofadza mishonga yekurapa madambudziko ekushaya vana muvakadzi. Chikamu chakanaka ndechekuti iwe haufaniri kuve nemayirisi evanhu nguva dzose sezvo iri muromo wemishonga. Iwewo unotanga kuona zvigumisiro mukati mechinguva chiduku kunyange vamwe vashandi vanorondedzera kubata pamuviri mushure memwedzi mitatu yemutengo.
The Ultimate Guide to Testosterone decanoate for Bodybuilding(Inotanga mune itsva browser tab)
Iye zvino sezvo chiremba wako akupa chirairo, zvinowanzoita kuti unzwe uchifara uye uchinetseka kuti uedze. Izvi zvinogona kukutungamirira kuti uzvitenge kubva kune mutengesi wokutanga anouya iwe, uye ichocho chikanganiso chikuru. Kana uri kutarisira kutenga Clomid, unofanirwa kuchenjerera kuti uone kuti uri kuitora kubva kune akavimbika Clomid anotenga uye kuti iwe hausi kuwira mumusungo unonyadzisa. Pane kuwedzera kudiwa kwechigadzirwa ichi, icho chakaita kuti kuwedzerwa kwehuwandu hwevashambadziri vauya uye vachiti vanozvitengesa. Kana iwe usingafungi zvakakwana, iwe unopedzisa kushandisa mari yako yakawanda pane chimwe chinhu chisingagoni kukupa mitsva yauri kutsvaga. Uyezve, iwe unogona Tenga Clomid powder izvo hazvina kuchengetedzeka kushandiswa, izvo zvichaita kuti uve nemigumisiro yakaipisisa yakaipa uye marwadzo pane zvauri kutoita.
Tora nguva yako uye utarise mutengesi weCommid iwe unogona kuvimba naye. Kutenga Clomid paIndaneti kunokupa kusununguka kwaunoda kuti uwane yakarurama. Chengetedza mutsvaga mhinduro uye ona izvo vamwe vanhu vakatenga zvigadzirwa kubva kune mutengesi uyu ari kutaura nezvechigadzirwa. Iwe unogonawo kune mazano kubva kune shamwari kana hama yako yaunoziva yakashandisa chigadzirwa ichi kare uye urege kuti vakuudze iwe kune wavanoda. Mari inowanikwawo iyo inotarisa paunotarisira Clomid inotengeswa kunze kwekuti urongwa hwehushuwarisi hunovhara mari. Iwe haufaniri kuzvibvumira kuti uwane overcharged asi panzvimbo iyo, ita mamwe tsvakurudzo, uone mutengo wepamusi wemusika uye enda kune mutengesi nemutengo unonyatsonaka.
Mishonga ndeye nyaya yakaoma, uye iwe unofanirwa kuzvibata nekunetseka kwakanyanya. Usakurumidza kupinda mukutanga kukurudzira kunouya nenzira yako asi panzvimbo iyo, tsvaga chimiro. Nhau dzakanaka ndeyokuti isu iye zvino tiri mukana weClomid mutengesi munharaunda. Iwe unogona kuita urongwa hwako nyore nyore kuburikidza ne smartphone yako, uye isu tichatinunura pamusuo wako. Nhasi mitengo yedu inonzwisisika, uye iwe unogona Tenga Clomid muzhinji kubva kubasa redu-ushamwari. Tipei foni chero nguva iwe une mibvunzo kana kuti unoda rubatsiro mukugadzirisa yako. Mitsara yedu yekufonera yakazaruka 24 / 7.
Clomid yekurapa kusabereka muvakadzi- (Chidimbu)
Clomid yakaratidza kuva yakakosha kana ichiuya pakurapa kwezvinetso zvekuberekwa kune vakadzi. Inoshanda kuburikidza nekuita kuti muviri ufunge kuti maitiro eesrogen yevashandi akaderera kudarika ivo chaizvoizvo, ayo achiita kuti planditary gland iwedzere huwandu hwehutoriki hunokurudzira hormone. Izvi zvinoita kuti ovary ibudise ovum kana ova, uye mushumiri anokwanisa kutora pamuviri munguva yekuvhara. Icho chirevo chakajeka, uye mushonga wakashanda kune vakawanda vakatora nguva yavo kutsvaga Clomid yakarurama (50-41-9) uye akashandisa sezvazviri. Kana uri kutarisana nematambudziko api anobereka, edza kuisa mune ichi chigadzirwa uye unakidzwe nemigumisiro.
Zvisinei, iva nechokwadi chekuti unosanganisira chiremba wako muhuwandu hwehutano hwemigumisiro yakawanda. Usanonoka kuzivisa mushonga wako kana iwe uchinge uine humwe hukuru hwemigumisiro kana kana iwe uri weergic kune chero mishonga yemishonga. Saizvozvowo, fidza physic yako kana iwe ukava nemigumisiro yakakomba musati mamiriro acho achiwedzera.
Joham, AE, Teede, HJ, Ranasinha, S., Zoungas, S., & Boyle, J. (2015). Kuwanda kwekushaya uye kushandiswa kwehutano hwekuberekwa kune vakadzi vane polycystic ovary syndrome: data kubva kumudzimai mukuru-based based cohort. Nyaya yehutano hwevakadzi, 24(4), 299-307.
Berger, MH, Messore, M., Pastuszak, AW, & Ramasamy, R. (2016). Kushamwaridzana pakati pekusabereka uye kusagadzikana kwepabonde kune varume nevakadzi. Mishonga yekuita zvepabonde dzinoongorora, 4(4), 353-365.